ကုမ္ပဏီ သတင်း - Zhejiang Aoxiang auto-ထိန်းချုပ်ရေး နည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
HOLIDAY အသိပေးစာ 2019
ကျွန်တော်တို့၏ ရုံး လိမ့်မည် ဖြစ် ပိတ်သိမ်း မှ Ocသို့ဖြစ်r 1st သို့ Ocသို့ဖြစ်r 4th, 2019 ဘို့ အဆိုပါ အမျိုးသားရေး နေ့ အားလပ်ရက်များ နှင့် လိမ့်မည် ပြန်စသည် ပုံမှန်အစည်းအဝေး စစ်ဆင်ရေး အပေါ် Ocသို့ဖြစ်r 5th, 2019 ခုနှစ်။
AOX ရှိပါတယ် ရရှိသော ATEX ပေါက်ကွဲမှု-အထောက်အထား လက်မှတ်
AOX ရှိပါတယ် ရရှိသော ATEX ပေါက်ကွဲမှု-အထောက်အထား လက်မှတ် ဘို့ AOX-မေး စီးရီး လေးပုံတပုံ-အလှည့် လျှပ်စစ် actuတွင်သို့မဟုတ် ယခု။ ဘို့ အသေးစိတ် inဘို့mတွင်ion, ကျေးဇူးပြု ထိတှေ့ ကျွန်တော်တို့ကို တွင် + 86-577-59890750 သို့မဟုတ် စာပို့ သို့ [email protected]
AOX လျှပ်စစ် actuator လိမ့်မည် ဖြစ် ကျယ်ပြန့် အသုံးပြုခံ့ တွင် Chတွင်a's နြူကလီးယား တွင်dustry
ပြီးနောက် တိကျခိုင်မာစွာ အလုပ်ရုံ ငှေစာရငျးစစျဆေး နှင့် လျှပ်စစ် actuaသို့r အရည်အသွေး စမ်းသပ်ခြင်း, ကျွန်တော်တို့၏ ကုမ္ပဏီ ရှိပါတယ် အောင်မြင်စွာ လွန် အဆိုပါ ကျွမ်းကျင်သော ကုန်သွင်းသူ အကဲဖြတ် ၏ တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသားရေး နြူကလီးယား အသင်း (CNNC) နှင့် နည်းလမ်း ထို AOX ရဲ့ high-အရည်အသွေး လျှပ်စစ် actuaသို့rs လိမ့်မည် ဖြစ် ကျယ်ပြန့် အသုံးပြုခံ့ တွင် တရုတ်နိုင်ငံ's နြူကလီးယား တွင်dustry, contributတွင်g သို့ အဆိုပါ ဆောက်လုပ်ရေး ၏ တရုတ်နိုင်ငံ's နြူကလီးယား တွင်dustry.
AOX လျှပ်စစ် actuator ခဲ့ မြင့်မား တန်ဖိုးဖြတ် အားဖြင့် မြို့ ခေါင်းဆောင်များ
အပေါ် အဆိုပါ နံနက် ၏ စက်တင်ဘာလ 18, အတွင်းဝန် Chen က က Shengfeng ၏ Ruian စည်ပင်သာယာ ကော်မတီ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည် Zhejiang Aoxiang Auသို့control နည်းပညာ Co. , Ltd. , အတွင်းဝန် Chen က က ပေးတျောမူ ပြည့်သော မှတ်မိခြင်း သို့ Aoxiang ရဲ့ မြင့်သော စွမ်းဆောင်ရည် လျှပ်စစ် actuaသို့r နှင့် pneumatic actuaသို့r. သူ မျှော်လင့် ထို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တတျနိုငျသ တိုးမြှင့်လာသည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, မာစတာ အဓိက နည်းပညာ, expနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ထုတ်လုပ်မှု, မြှင့်တင်ရန် brနှင့် အဆောက်အဦး နှင့် အဆက်မပြတ် ဖွင့်လှစ် ထ စျေးကွက်။
နိဒါန်း သို့ အဆိုပါ အရစ်ကျ နည်းလမ်း ၏ ကောင်းသော သေးငယ်သော အခင်အရှင် လျှပ်စစ် စက်ကိရိယာ
အခင်အရှင် လျှပ်စစ် စက်ကိရိယာ output torque ဆက်စပ် အသိပညာ နိဒါန်း